Hinbariine. Dimimmisa keessa jirra. Yoo laafne dukkanatti deebi’uu keenyatu mala. Yoo jabaanne ifatti baana. ~ Obbo Leencoo Lataa | Kichuu
Posted on October 10, 2019 by kichuu_admin
Dubbii obbo Leencoon har’a dubbate keessaa waa hubadhe. Obbo Leencoon nama jijjiirama kanarraa abdii guddaa qabaachaa ture. Amma garuu akka sodaa qabu haasawa isaarraa hubatama. Namni kun muuxannoo qaba. Hubataadha. Waan itti mul’atetu jira. “Har’as yoo wal taane malee hammeenyi as deemaa jiru, kan abbootii keenya irra gahe yoo caale malee sanaa gadi hin ta’u” jedhe. Kan hammeenya nurratti raawwachuuf qophaa’e kun ilmaan Nafxanyaa akka ta’e ifa jedheen amana. Garuu kan obbo Leencoo yaaddesse carraan nafxanyaan deebitee olbahuu uumamamaa jiraachuu isaa natti fakkaata. Osoo carraan isaan itti deebi’anii olbahan xiqqaa tahee jechi ulfaataa fi sodaa ofkeessaa qabu obbo Leencoo keessaa hin bahu. Dhaamsa isaa keessatti “dhaabonni Oromoo tokkummaa isaanii haa jabeessan” jedhe. Waa malee irra deebi’ee tokkummaa kana hin labsine. Paartiilee Oromoo tokkoomsuuf tattaaffiin godhamaa akka jiru quba qabna. Ta’ullee diiguufis akka irratti hojjatamaa jirus hubachuun gaariidha. Walumaa galatti haala amma deemaa jiru akka salphaatti ilaallee lammata akka hin nyaatamne Oromoon ija banatee laaluu akka qabu irraa hubadhe. Via: Ferhan Abdulselam
Nafxanyaa Oromoon umurii guutuu of irraa lolaa ba’etu hulluuqee mana seenee maqaa Oromootiin barcuma qabate. Namni hedduun dhugaa adii dirree gubbaa jirtu kana fudhachuu dhabaaf rakkataa jira. Fakkeessaan hafee waliigalteedhaan diina keenya maqaadhaan ‘diina’ jennee waamuu hamma barrutti salphifamuun Oromoo dhaabataa hinjiru. #Abiy_Must_Go!
OMN: Oduu Galgalaa (Onkoloolessa 10, 2019)
Kiyyoo Diinaa: Haa Eegannu!
Dhagaa bu’uuraa abbooti Gadaa Hora Finfinnee dhaaban diinni caccabse. Maaliif? Miiressee tulluu irraa gadi nu mucuceessuf! Akka jarri yaadutti aarree hookkara kaafna! Iyyinee siidaa ykn dhagaa jaraa caccabsuu deemna! Garuu nuti san hin goonu! Nuti waan muldhatu hojjannee hamilee lammii jabeessina malee dhagaa cabsuuf humna qisaasnu hin qabnu! Paarkii irreechaa keessa siidaa qeerroo fi qarree dhaabna! Gara diinni fedhutti otoo hin taane muldhata keenya dhugoomsuuf deemna! Itoophiyaa haarawa bilisummaan, qananiin, walqixxummaa fi obbolummaan keessatti dhugoome ijaaruuf sabaaf sablammoota waliin hojjanna! Gaanfa Afrikaa nageessina! Hamilee Afrikaa ol kaafna! Asii olee taphanna! Akka risaa rakkoo irraa fagaannee balaliina!
Barri aarsanii gara fedhanitti nu hoofan qaata kute!
OPDOn kalleesa bara mallas zeenaawii aangoo irra tures isaan Meeshaa godhatanii itti fayyadamaa turan malee warra dandeeytiif hubannoo siyaasaa qabanii miti. Of duras dandeeytii qabaachuuf warra deemanii miti. Yeroo ilmaan tigreen durfaman ofiifis uummata oromoo saamuufii saamsiisaas turaniidha.
Garuu immoo gamoo tokko FINFINNEE keessaa hin qaban.Sababbiin isaas ofii isaaniitiif waan garaaf bulaniin BIRRII 3000 argachuuf warra ormaaf Waan MILIYE ENA 3 kennaa turan waan ta‘aniif
Mallas zeenaawii ilmaan TIGROOTAA Fii bitamtoota warra garaa ilmaan Oromoo keessaa fifilatee, mana oromoo gootummaan beekamu yookin Iddoo oromoon Sabboonummaan socho’aa jiran filatee ergamtoota ofii BOONBII yookin QAWWEE yookin ALAABAA ABO harka kaayee, Gara Iddoo Yookiin mana itti xiyyeefatametti erguun ofumaa keechisiisanii, ofumaas sakataasisee, ofumaayis waliin qabsiisee hidhaatti guursiisaa akkasumattis ajjeesiisaa qabsoof qabsaahoota oromoo qancarsuu irratti shoora siyaasa guddaa taphataa kan tureedha.
Yoo fedhes masgiida, charchii, mana baruumsaa, mana yaalaa Fii wantoota FAAYIDAA uummataa tiif dhaabbatan gubsiisaa, maqaa warra ittiin miidhuuf sirreessuu barbaadutti maxxansuun ittiin adabaa, rakkoo uumamee sanis battalumatti furuun hojiin agarsiisaa Ittiinis of jaalachiisaa
#siyaasa_bulchiinsa ofii haalaan adeemsifachaa kan tureedha.
Kana hundaa gochuuf #humna_tikaa saba TIGROOTAAf saboota biroo keessaa warra garaaf bulan qofa filatee, Caasaa sana baldhinaan diriirsee, MARAATTUU, Hanga HATTUU, QEESSII hanga SHEEKII, BARATAA hanga Hojjataa, QOTEE BULAA hanga WAYYAALAA tti diriirfatee, uummata hunda keessa bobbaafatee, sochii tokkoo mitii yaada waan kamiituu otuu hin kaasne dhabamsiisuu danda’eera.
Haala kanaan oromoon hundii cabee, hedduun akka baheen hafee, hedduunis du’aan of biraa dhabnee, sabni guutuun MADAAHEE, MANNII OROMOO hundii sakkata’amee, Qe’een keenya onee QAWWEE takkaa mitii ALBEEN gaariin takka mana oromootti akka hin argamneen qulqullessee jira.
Mannii amhaaraa Oromiyaa keessa jiru kan qawwee hin qabne hin jiraa…??
Akka oromoon hiikateetti AMHAARRII hiikateeraa..??
AMHAARA biyya jeeqaa jirtu adabamaa jiruu.?
Dhuguma OPDOn siyaasa beektii Siyaasaan biyyaa bulchaa jiran jedhamaa?????
Suuraalee aanooleef calanqoo irratti
Siyaasa baruuf waggaa 12 barachuu irraa guyyaa 12 obboo leencoo lataa wajjiin turuu wayya.
ONkoloolessa 10/2019) oromoota harka muraa fi harka muraan irratti raawwateef osoo oromoon gadduu Dr Abiyyiin nama kana godheef siidaa dhaabe.
Godaannisni oromoota biratti hin irraanfatamne yoo jiraate waan minilik oromoo irratti raawwatedha.
Kan bara mallas biyya bulchu hin taane bara hoggansa Dr Abiyyii biyya bulchu kan ODP bakka bu’ee kiiloo afur galeen sirna nafxanyaa nurratti olaantummaa isaanii mul’ise.
Oromoo Dr Abiyyiin anis minilik lammaffaa siin jechaa jira yoo dafeen dammaqne wallaggaa fi Gujii kan eegale Dirree Dhawaa fi Walloo irratti babal’ataa Jira.
Kanaaf irree tokkoon nafxanyaa Dr Abiyyiin durfamu of irraa darbuu qabna.
Yeroon tokko taanee falmannu amma ka’i oromoo WBO bosona jiru cinaa dhaabbadhu sirni bara minilik sirratti deebi’uuf deema.